Ngabe sikulungele ukubhekana nolaka lwemvelo - Bayede News
Okwenzeke eThekwini naseGoli kubukeka kwembule elakuleli izinqe ngezinhlelo
Inyanga kaMfumfu iqale kahle edolobheni iTheku. Leli dolobha belingangcini nokuba nemicimbi nemidlalo edonsa izihlwele zabantu kepha ibiphithizela yizivakashi njengoba bekuyizikhathi zamaholidi ezikole. Nokho leyo njabulo iphenduke ngokuphazima kweso ngesikhathi leli dolobha lihlaselwa yimvula ebiphelezelwa yisiphepho esinamandla. Konke lokhu kudale umonakalo obalelwa ezigidini njengoba kungagcinanga nje ngokucekeleka phansi kwezakhiwo, ezokuthutha kanye nemizi yabantu. Khona lapho kulimale kwaphinda kwedlula emhlabeni nabantu kwaphazamiseka ukufunda nokufundisa, ezinye izindawo zokusebenza zavalwa. Lezi zimvula nesiphepho kufika nje elakuleli liphuma kwesikhulu isomiso esikhinyabeze kakhulu abantu, imfuyo kanye nomnotho.
Yize kwamukeleka ukuthi lesi yisimo sezulu okungekho muntu onamandla okusivimba, okwenzeke eThekwini nakwenzinye izifunda ezifana naseGauteng kushiye umbuzo ekutheni ngabe elakuleli lilungele kangakanani ukubhekana nolaka lwemvelo ekade labe lubikezelwa ukuthi luyeza. Elakuleli aligcini ngokuba yilungu lenkundlamshikashika yamazwe omhlaba akhe umkhanya ngesimo sokuguquguquka kwezulu, lisekhaleni lomkhankaso wokwenza umfelandawonye wamazwe akha naqhuba izinhlelo zokubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu. Lokhu kwenza kube nesithombe sokuthi leli lizwe limi ngomumo.
Okwenzeke kweleNdlovukazi uMthaniya kubukeka kwembule izinqe zonke izinhlaka zomphakathi kubalwa nazo izakhamuzi imbala. Phezu kwemizamo kaHulumeni yokwakha amathimba osizo, umphakathi ubukeka usemuva ngokuqonda ngokuguquguquka kwesimo sezulu nokwenza kubeka wona qobo engozi. Lokhu kugqame lapho abanye babashayeli bezithuthi bebhajwa ‘emadamini’ amanzi benqaba nokuphuma bashiye izithuthi zabo obekufaka bona kanye nalaba abazama ukubasiza engozini.
Okunye okube sobala wukuguga kwegqalasizinda njengoba ezindaweni ezithize ezifana namalokishi lapho kuhlala khona aboHlanga amanye amapayipi afakwa eminyakeni engaphezu kwamashumi amahlanu osekunzima ukumelana nezimfula. Kunjalo nasemigwaqeni okubonakala ukuthi eminye yabe ivelwe ingakhiwanga kahle ngoba kunele kube namanzi amaningi kube sekuphelile ngayo. Ngisho nezibhedlela ezindala ezifana neKing Edward VIII impilo yabahlengikazi neziguli ise ngcupheni. Namanje kubukeka kuseyinhlahla ukuthi kawukho umonakalo obikwe ezindaweni eziyimijondolo okuvame ukubikwa izinhlekelele nxa kunemvula noma umlilo.
Ngesikhathi kwenzeka konke lokhu usizi belubhalwe emehlweni kwabanye abazali imfula nesiphepho okufike besematohweni kwenye ingxenye yedolobha, izingane zabo zisezikoleni kwenye ingxenye yedolobha. Obekuvela ezinkundleni zokuxhumana akusizanga kunalokho kudale ukwethuka njengoba abazali bebebuka okwenzeka emakhaya bekude nemindeni nezingane zabo. Nalapha kubukeka kube yinhlanhla ukuthi isishingishane nezulu kudambile nokwenze bakwazi abafundi abaningi kanye nabazali ukufinyelela emakhaya bengenamyocu, nokho ezinye izikole azibanga nenhlanhla enjalo ngoba amanzi nomoya kuphephule izakhiwo kwaphazamiseka ukufunda nokufundisa. ElaboHlanga liye koshicilelwa kunemibiko ethi ukufunda nokufundisa akukabuyeli ngokugcwele kwezinye zezikole ezingama-42 ebezivaliwe ngenxa yomonakalo nokusabela impilo yabafundi ngalesi simo esenzekile. Konke lokhu kushiye umbuzo ukuthi engabe lukhona yini uhlelo lwezokuphepha ezikoleni olubekelwe ukubhekana nesimo esenzeke kuleli sonto.
Kuvela amanye amahlazo ngokubulawa kukaNtombela
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu Natal uMnu Sihle Mlotshwa ebuzwa ngelaboHlanga ukuthi zikhona yini izinhlelo ezikhona uthe, “Ngeke sithi njengoMnyango sinalo uhlelo oluqondile lokubhekelela nokufundisa ngezinhlekelele ngoba uMnyango uncike kakhulu ezimfundisweni ezitholakala kwabezimo eziphuthumayo okuyibo abaqeqeshelwe khona ukubhekana ngqo nakho. Izinhlekelele azikhethi ukuthi zihlasela bani, futhi wenza muphi umsebenzi, yingakho wonke umuntu ethinteka kulesi simo. Kodwa siyaye sinxuse oThishomkhulu ukuba basheshe bazidedele izingane nabo baphume ezikoleni ukuze baphephe kulezi zinhlekelele nabazali babe nezinhlelo zokuthi basheshe bezilande izingane zabo ezikoleni,” kuphetha uMlotshwa. ElaboHlanga lixhumane nabezimo zezulu, iSouth African Weather Services ukuze lithole ukuthi izimo ezifana nalezi benzenjani ukuxwayisa umphakathi ukuze ube nolwazi ngokuguquka kwesimo sezulu.
UMnu Wisani Maluleke oyisangoma sezulu uthe, “Kumele sikucacise ukuthi izinhlekelele izinto ezenzekayo ngokwemvelo, akekho umuntu onamandla phezu kwazo zonke izinhlekelele ezenzekayo emhlabeni. Uma kukhona okubonakalayo ukuthi kungahle kwenzeke, siyaye sithumele izexwayiso kwabezimo zezinhlekelele ukuba bazise imiphakathi ngokulindeleke ukuthi kwenzeke esimweni sezulu. Siphinde siye ezikoleni siyofundisa abafundi mayelana nezinhlekelele bese siqapha usuku nosuku ukuthi sisheshe sazise umphakathi.”
Okuvelayo wukuthi abe Weather Service bayazikhipha izexwayiso izinsuku eziyisithupha kungakenzeki kepha inkinga isekutheni lolu lwazi lufika nini kubantu okuyibo ababa senkingeni. Enye imboni ethinteke kakhulu kulokhu yileyo yomshwalense njengoba kuningi okulindeleke ukuba kubikwe kuyo njengoba abantu belahlekelwe yimpahla. Yize kunjalo iningi labantu baseNingizmu Afrika alikho ngaphansi komshwalense njengoba abantu abangamaphesente angama-20 nje kuphela okubikwa ukuthi banomshwalense wezindlu. Ngokuthola kwelaboHlanga iningi lezindlu ezisemalokishini azinawo umshwalense nokungathi uma abanikazi bazo beqala manje ukuba yingxenye yawo kubize njengoba iningi lezindlu sezindala.
Bayede News Oct 20, 2017